Ọtụtụ Wagons na Ọnọdụ Ọnọdụ na Köseköy Logistics Center | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliIri puku kwuru iri nke Wagons na Assembly na Köseköy Logistics Center
12 / 11 / 2019 41 Kocaeli, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ọtụtụ ụgbọ agha na nzuko omeiwu na logistics center ke kosekoy
Ọtụtụ ụgbọ agha na-enweghị ọrụ na Köseköy Logistics Center nọ na Mgbakọ; Onye isi nchịkwa HDP Kocaeli Ömer Faruk Gergerlioğlu jụrụ banyere ebubo na enwere ọtụtụ ụgbọ ala na Köseköy Logistics Center
Onye isi oche Peoples Democratic Party (HDP) Kocaeli bụ Farmer Faruk Gergerlioğlu, Minista ationgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turan rịọrọ ka azịza ya site na ịrịọ ka ọtụtụ ụgbọ agha na Köseköy Logistics Center jụrụ. "E nwere ọtụtụ ụgbọ agha na Köseköy Logistics Center nke na-adịghị arụ ọrụ, a hapụrụ 5 ka ọ ghara ire ere ebe a ihe karịrị otu afọ, ụgbọ ndị ahụ bụ ụgbọ okporo ígwè ndị dị n'akụkụ na-eje ozi n'etiti Gebze na Haydarpaşa, ụgbọ ndị ahụ anọwo na-eje ozi afọ ole na ole gara aga." Gergerlioğlu jụrụ ajụjụ ndị a:
“HOWB YER MAN afọ ole ka ANY WAR AT EGO A?”
O bu eziokwu na ugbo agha di na Köseköy Logistics Center? Ọ bụrụ na ebubo ndị a bụ eziokwu, kedu ihe kpatara ọtụtụ ụgbọ ọgbụgba n'ime Kocaeli Köseköy Logistics Center? Gịnị mere ejiri ụgbọ mmiri ndị a na-anọ nkịtị? Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ụgbọ ọgbụgba na-enweghị ọrụ na Köseköy Logistics Center, afọ ole ka ụgbọ ala ndị a ka nọ na-eche ebe ahụ?
N G in i bu or u? ”
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ụgbọ ọgbụgba na-arụ ọrụ na Köseköy Logistics Center, kedu ụgbọ ndị a na-eche? A ga - eji ụgbọ agha ndị a mgbe ha rụzigharị n'ụlọ mmepụta ihe? Kedu ihe Ministri gị na-eme iji rụọ ụgbọ ndị a? Enwere mkpesa banyere okwu a ezigarala Ozi gị? Gini bu ihe omumu emere banyere ugbo ala nke ejighi ya na 5 gara aga? (na Kocaeligazete)
Il Dozens Kocael ebe ndị bi na Kocaeli na-eche ụgbọ oloko
Oge nke Mbibi na Ọwara Wayş, nke nọworo na steeti ruo ọtụtụ afọ
N’India, Dgbọ ahụ Agabatara na Nnukwu Atụrụ, Dozens Koy
Intertraffic Istanbul, oge
Kahramanmaras 1. Ememe Irishkit asaa Elele…
ulo oru nchikota akuko